मंगलबार, कार्तिक २, २०७८ ०७:२४:०९ युनिकोड
सोमवार, श्रावण ३२, २०७८ जागरण समाचार
तपेन्द्र कुँवर, अछाम।
अछामको रामारोशन गाउँपालिकाका अध्यक्ष झंकर साउँद भाष्करले व्यवसायिक रुपमा कालो धान जी–६० ब्ल्याक राइस खेतिको सुरुवात गर्नु भएको छ।
सुरुमा कालो धानलाई देखेर रहरले सुरुवात गर्नु भएका अध्यक्ष साउँदले अहिले भने कालो धानको विशेषता बुझेर व्यवसायिक रुपमा अघि बढाउनु भएको हो।
पाँच वर्ष अघि परिक्षणका लागि लगाईएको कालो धानबाट राम्रो आम्दानी हुँने देखे पछि अध्यक्ष साउँदको कालो धानमा आकर्षण बढ्दै गएको हो। पाँच वर्ष अघि उहाँले परीक्षणका रुपमा एक रोपनीमा कालो धान लगाउनु भएको थियो।
उहाँले दुई वर्षसम्म परिक्षणको लागि मात्रै कालो धान रोप्नु भयोे। कालो धानको चामलको माग बढ्न थाले पछि तीन वर्ष अघि व्यवसायिक रुपमा कालो धान लगाउनु सुरु गर्नु भएको हो। यसलाई व्यावसायिक रूपमै अगाडि बढाउनका लागि तेस्रो बर्ष २० रोपनीमा कालो धान लगाएको गाउँपालिका अध्यक्ष साउँदले जानकारी दिनु भयो।
तेस्रो बर्षमा कालो धानको उत्पादन २० क्वीन्टल भन्दा बढी भएको बताउनु भयो। गत बर्ष रामारोशनमा आएको बाढीका कारण करिब १० रोपनी जग्गा बाढीले बगायो।
उहाँले भन्नु भयो–अहिले १० रोपनीमा कालो धानको लगाएको छु। बहुगुणकारी यो धान आर्थिक दृष्टिकोणले पनि अत्यन्त लाभदायक छ। बेर्ना सारेको ९० दिन भित्र यो धान पाकि सक्छ। स्थानीय तवरले खेती गर्दा अन्य धान सरह नै फल्छ। स्थानीय स्तरमा कालो धानलाई प्रतिकिलो ८ सय देखि १ हजार सम्म पर्ने गरेकाले बढी आम्दानी भएको गाउँपालिका अध्यक्ष साउँदको भनाई रहेको छ।
खेती योग्य जमिनमा जहाँ पनि फल्ने कालो धानलाई असिना पानीले समेत कुनै असर नगर्ने र पाकि सके पछि थ्रेसर मेसिनबाट मात्रै झार्न सकिने अध्यक्ष साउँदको भनाई रहेको छ। कालो धानको चामलको माग शहरी क्षेत्रका होटलमा बढ्दो छ। कालो धानको माग स्वदेशमा मात्रै नभई विदेशमा पनि उत्तिकै रहेको छ। उहाँले भन्नु भयो–आफूले फलाएको कालो धान अमेरिका देखि भारतमा समेत निर्यात भएको छ।
बजारको माग बमोजिम कालो धान अझै उत्पादन गर्न सकेको छैन। सबै भन्दा बढी भारतका विभिन्न होटलहरुमा कालो धानको माग बढ्दो छ। स्वेदशमा भने होटल देखि नेपाली सेना, प्रहरी प्रशासनबाट कालो धानको माग हुने गरेको छ। रामरारोशन क्षेत्रमा घुम्न आउने आन्तरिक तथा बाह्रय पर्यटहरुले पनि कालो धान किन्ने गरेका छन्। कालो धानलाई पर्यटन क्षेत्रसँग जोड्ने योजना गाउँपालिका अध्यक्ष साउँदको रहेको छ। नेपालको जमिनमा यो धानले प्रवेश गरेको १२/१५ बर्ष मात्र भएको छ।
कालो धान नेपालको जमिनमा प्रवेश नभएका कारण यसको बारेमा जानकारी लिन आन्तरिक तथा बाह्रय पर्यटक रामारोशन आउने गरेका छन्। गाउँपालिकामा अन्य कृषकहरुले पनि व्यवासायिक रुपमा कालो कालो धानको सुरुवात गरेमा यसको बारेमा जानकारी लिन पर्यटक आउने गाउँपालिका अध्यक्ष साउँदको बुझाई रहेको छ।
पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्नको लागि कालो धान एक माध्यम बनेको छ। गाउँपालिकाका अन्य केही कृषकहरुले पनि आफूलाई खानको लागि कालो धानको सुरुवात गरेका छन्। उहाँले भन्नु भयो–अब अन्य कृषकलाई पनि कालो धानको बीउ वितरण गरी गाउँपालिकामा व्यावसायिक रुपमा यसको उत्पादन गर्ने योजना रहेको छ।
कालो धान आर्थिक दृष्टिकोणले मात्रै हैन स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण रहेको छ। बढी प्रोटिन प्राप्त हुने कालो धानको चामल स्वास्थ्यका लागि पनि निकै उपयोगी रहेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाई रहेको छ। कालो धानका विशेषता जी–६० ब्ल्याक राइस उच्च पोषणयुक्त धान हो।
एक व्यक्तिले एक दिनमा १५ ग्रामका दरले अन्य चामलमा मिसाएर खाएमा रक्तअल्पता, मधुमेह, क्यान्सर, हृदयाघात, उच्च रक्तचाप, मुटु रोग, अलजाइमर्स जलनवाट बच्न सकिने डा. विकास गौचनको भनाई रहेको छ।
पकाउनु अघि दुई घन्टा भिजाएर मात्रै पकाउनु पर्ने र भिजाएको पानीलाई सर्वतको रुपमा सेवन गर्दा स्वास्थ्यका लागि फाईदाजनक हुने बताईएको छ। गर्भवती महिला र शिशुलाई स्तनपान गराउने आमाहरूको लागि अत्यन्त लाभदायक हुने डा. गौचनको भनाई रहेको छ।
यो चामल स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण भएका कारण यसको थप खोज तथा अनुसन्धान हुन आवश्यक रहेको डा. गौचनको सरोकारवालाई सुझाव रहेको छ।
प्रकाशित मिति: सोमवार, श्रावण ३२, २०७८, ०३:०३:००